Kuzodela uMakhasana kokazime ePMB | News24
Kuzodela uMakhasana kokazime ePMB
PHOTO:sithunyelwe UMiss KZN Traditional uzokuba edolobheni uMgungunndlovu zi-5 kuZibandlela.
ZIZODLANA imilala lapho izintokazi eziliqhamukisa kuyo yonke iKwaZulu-Natal ziqhudelana kokazime uMiss KZN Traditional 2015 ohlelwa yi-Imbaliyezwe ukuba ube seBessie Head Library Auditorium mhla zi-5 kuZibandlela (December).
Lo mqhudelwano sekungowesine kanti kowokuqala umhlanganiso wadliwa yintokazi yaseMbali uBusie Mayila, kwathi owesibili wathathwa uThando Shelembe waKwaSwayimane kanti wona wabanjelwa eTugela Ferry eMzinyathi.
Ngonyaka odlule kwaphumelela uZama Mthethwa waseLadysmith emqhudelwaneni owabe ubanjelwe edolobheni uMgungundlovu.
Umgqugquzeli uMbuso Nyandu uthe kubukeka lo mcimbi unesasa elikhulu kulo nyaka njengoba nabazali bezingani bayaweseka nje.
“Inhloso yokwenza lo mqhudelwano kazime wesintu ukuzama ukukhumbuza abantu abasha ngemvelaphi yabo, namasiko. Kanti futhi sizama ukuqoqa intsha ingazibandakanyi kwizidakamizwa, kanye nokuziphatha, inhlonipho, ukungatheleleki yigcewane lesandulela ngculazi.”
Kungenwa ngo-R80 emnyango kanti umcimbi uhlelwe ukuthi uqale ngo-11 ekuseni.
Abafisa ukungenela basenalo ithuba. Bangashayela yena uNyandu ku-079 616 0059 noma 083 537 5665.– Ithunyelwe.